Nanatontosa Fihetsiketsehana Goavana Manohitra Ny Herisetra Mahery Vaika Sy Ny Fitantanana Tsy Mahomby Ny Afghàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2015 16:27 GMT
Tatitry ny CCTV momba ny fihetsiketsehana. Pikantsary tao amin'ny fantsona Youtube ofisialin'ny CCTV.
Olona an'arivony no nirohotra tao Kabul tamin'ny hetsika goavana, vahoaka mbola tsy nisy toy izany manohitra ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana ao Afghanistan tamin'iry herinandro iry.
Endri-panehoana goavana ny herin'ny olom-pirenena ny fihetsiketsehana teraka noho ny famonoana ho faty ireo olona fito avy amin'ny foko Hazara teo am-pelantanan'ireo milisy voalaza fa mifandray amin'ny ISIS. Antso fanairana ny governemanta matetika marefon'ny Filoha Ashraf Ghani ihany koa izany, izay nahita ny firenena ho tsy mahavita na inona na inona hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fahefana tamin'ny tamin'ny herintaona.
Notarihan'ny foko Hazara, iray amin'ireo vondrona natao an-jorom-bala sy nenjehina indrindra ara-tantara tao Afghanistan, saingy nihoatra noho ny raharaha ara-poko ny vondrona avy eo, nahasintona Tajiks, Pashtuns, Uzbeks ary Sikhs, ny fihetsiketsehana tamin'ny 11 Novambra.
Nentin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny vatam-patin'ireo Hazaras fito, voalaza fa voatapadohan'ireo mpomba ny ISIS, nivoaka avy amin'ny Al Qaeda izay tonga nifehy ireo faritra midadasika ao Syria sy Irak, saingy mbola mitana ny fisiany ao Afghanistan ihany koa.
Ny efatra tamin'ireo olona nalaina an-keriny ary novoina ho faty tao amin'ny faritanin'i Ghazni dia lehilahy, roa ny vehivavy, ary zazavavy sivy taona ny iray izay an-jatony no nanao ny sariny ho sarintava tamin'ny Facebook Afghàna.
Nanjary mariky ny fitomboan'ny herisetra mahery vaika ny fahafatesana feno herisetra, izay toa tsy voafehin'ny governemantan'i Ghani, herinandro vitsy monja taorian'ny fitoraham-bato nataon'ny vahoaka tamin'ilay tovovavy 19 taona, Rokhshana, tao amin'ny faritanin'i Ghor.
Nanomboka tamin'ny 10 Novambra ny fihetsiketsehana raha mpikatroka fiarahamonim-pirenena an-jatony, olona sy mpianatra no nitangorona tao amin'ny Park-e Zarnigar *, zaridaina ao afovoan'i Kabul dimy minitra monja miala ny Lapa ARG an'ny governemanta.
Nametrahana tranolay tao amin'ny zaridaina nanomboka tamin'ny volana Febroary, raha nalaina an-keriny tsirairay ireo Hazaras 31, voalaza fa nalain'ny ISIS an-keriny.
Napetraka ny tranolay tany am-boalohany mba hiantsoana ny fandraisana andraikitry ny governemanta taorian'ny fakàna an-keriny voalohany, saingy tsy niraharaha tanteraka ny fisian'izany ny governemanta. Abdullah Abdullah, Tale Jeneralin'ny Governemantan'ny firaisam-pirenena ihany no nitsidika tao tamin'ny herinandro lasa, ary tsy nahavita nanome fahafaham-po ny mpanao fihetsiketsehana ny fampanantenana manjavozavo nataony.
Raha mbola nitangorona tao izy ireo, nitondra ny fatin'ireo havan-tiany notapahin-doha tao Kabul tao anaty vatapaty ireo havan'ny maty.
Niezaka nanakana ny olona tsy hizotra mankany Kabul miaraka amin'ireo faty ny fitondram-panjakana saingy mbola tonga tao an-drenivohitra ihany izy ireo niaraka tamin'ny fiara maherin'ny 300 ny harivan'ny 10 Novambra . Olona an'arivony, izay Hazaras avokoa no ​​ankamaroany tamin'ny fanombohany, no nandray azy ireo tao Dasht-e Barchi, tangoro-ponenan'ny Hazara ao andrefan'i Kabul izay tsy raharahan'ny fanjakana mihitsy.
Sarin'ny fihetsiketsehana nalaina tao amin'ny pejy Facebookn'i Abdullatif Dianatmadari, nahazoan-dalana.
Milaza ny sasany fa nanamarika ny fihetsiketsehana goavana indrindra manohitra ny governemanta izay mbola tsy natrehin'i Afganistana ampolony taona maro ny hamafin'ny fihetsiketsehana, raha nirohotra tao ARG ny mpanao fihetsiketsehana rehetra.
Amrullah Saleh, lehiben'ny Fitantanana ny Fiarovam-pirenena teo aloha (Sampam-pitsikilovana ao Afghanistan), nanoratra tao amin'ny kaonty Twitter-ny:
Nihantsy ireo mpitarika ny Jihad mihalò ihany koa ny fihetsiketsehana tao Kabul, ho azy ireo dia tokony hotendrena ny tetezamita [tsy mahavita na inona na inona?]. AFGHANISTAN VAOVAO.
Malemy sady tsy tompon'andraikitra ny valintenin'ny governemanta. Nilaza ny fanekeny tanteraka ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny fampihenana ny herisetra tamin'ny alalan'ny fahitalavitra tantanin'ny fanjakàna ny Filoha Ghani. Nampitovy ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny mpirenireny an-dalambe nantsoin'ny “resy ara-politika” hanao fihetsiketsehana kosa i Mohammad Mohaqiq, izay milaza ny tenany ho politisiana Hazara ao anatin'ny Governemantan'ny Firaisam-pirenena nifampizarana fahefana.
Nandao ny vavahady atsimon'ny ARG tao anaty alahelo sy ranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony niandry ny fahatongavan'ny governemanta hatramin'ny misasakalina taorian'ny tenin'i Mohaqiq.
Mety ho nahavita zavatra goavana tamin'ny fangatahana fifampiresahana amin'ny governemanta mandeha amin'ny fahitalavitra ny mpanao fihetsiketsehana. Nitolefika tao anaty teritery tokoa i Mohaqiq. Tahaka izany koa i Ghani
Nentina niverina tao Dasht-e Barchi ihany ireo vatana mangatsiaka, sy ireo mpanao hetsi-panoherana an'arivony tezitra nefa tsy tsy kivy. Tsy mifarana hatreo ny hetsika, fa vao fanombohany ihany, miaraka amin'ny fitakiana mahery sy ara-dalàna ho amin'i Afghanistan azo antoka kokoa.
* Tao amin'ny Park-e Zarnigar no nalevina i Abur Rahman Khan, Mpanjakan'ny Afghanistan (1880-1901) izay mpanjaka nanomboka nanenjika ny Hazaras. Izy no heverina fa namono ny ny 60%n'ny vahoaka Hazara tao Afghanistan tamin'izany fotoana izany.